ဘင်ဖီကာ ပေါ်တို ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ဖို့ ကင်းထောက် စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် … ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ ?? - SPORTS MYANMAR
ဘင်ဖီကာ ပေါ်တို ပွဲစဉ်ကို ကြည့်ဖို့ ကင်းထောက် စေလွှတ်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် … ဘယ်သူ့ အတွက်လဲ ??
အင်္ဂလန် ရဲ့ အပြောင်း အရွှေ့ ဘောလုံး ရာသီ ဟာ ပိတ်သိမ်း ခဲ့ ပါပြီ ။ ဒါပေမယ့် အခြား ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် တွေ ကတော့ စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့ မှာ အပြောင်း အရွှေ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်း မှာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အချိန် အထိ တော့ အင်္ဂလန် အပါအဝင် ဥရောပ ကလပ် တိုင်းက နေရာ အနှံ့ ကင်းထောက် တွေ စေလွှတ် နေကြ ဆဲ ပါပဲ ။ အခုလို လုပ်ဆောင် ရခြင်း ရဲ့ အဓိက အကြောင်း အရင်း က နောက် ရာသီ တွေ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ ပါပဲ ။
အခုလို နောက် ရာသီ အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင် နေတဲ့ အသင်း တွေထဲ အင်္ဂလန် ထိပ်သီး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း လည်း ပါဝင် နေခဲ့ ပြီး ဘင်ဖီကာ0–2ပေါ်တို ဆိုတဲ့ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အတွက် ကင်းထောက် တွေ စေလွှတ် ခဲ့တယ် လို့ သိရှိ ရ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် တို့ ဘယ် ကစားသမား တွေ အကြောင်း သိစေ ဖို့ အတွက် ကင်းထောက် တွေကို ပေါ်တူဂီ မြေဆီ သို့ စေလွှတ် ခဲ့ကြ သလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ် ။
(1) ရူဘင် ဒီယက်ဇ်
အသက် – 22 နှစ်
ကလပ် – ဘင်ဖီကာ
ရူဘင် ဒီယက်ဇ် အကြောင်း တော့ ထွေထွေ ထူးထူး ပြောနေ စရာ မလို ပါဘူး ။ သူဟာ ဒီနွေ အပြောင်း အရွှေ့ ကတည်းက ယူနိုက်တက် တို့ ခံစစ် အင်အား ဖြည့်တင်း ဖို့ စောင့်ကြည့် ခဲ့တဲ့ ကစားသမား ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
သူဟာ အသက် ငယ်ရွယ်သေး ပေမယ့် ဝါရင့် တိုက်စစ်မှူးတွေ ဆီက ဘောလုံး ယှဉ်လု ရဲတဲ့ အစွမ်းတွေ ပိုင်ဆိုင် ထား ပါတယ် ။ သူဟာ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင် မှု ပြည့်ဝ သလို IQ ကောင်းလွန်း တဲ့ ခံစစ် ကစားသမား တစ်ဦး လည်း ဖြစ် ပါတယ် ။
သူဟာ တစ်ဦး ချင်း ယှဉ်ပြီး ဘောလုံး လု ရတဲ့ အခါ မှာ ပြိုင်ဖက် ကို ဖြတ်ကျော် ခွင့် ပေးတက် တဲ့ ကစားသမား မျိုး မဟုတ် ပဲ လိုအပ် ပါက ပစ်ဒဏ်ဘော ( သို့ ) ပြိုင်ဖက် အတွက် အခြား အခွင့် အရေး တွေကို သာ ပေးတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းကတော့ သူဟာ အသင်း ရဲ့ 64 % သော ဘောလုံး ယှဉ်လုမှု တွေကို ပြုလုပ် ပေးနိုင် ခဲ့ပြီး ကြားဝင် ဟန့်တား မှု တစ်ပွဲ4ကြိမ် နှုန်း အထိ ပြုလုပ် နိုင်ခဲ့ကာ ခြေစွမ်း ကောင်း ပြသ နိုင် ခဲ့တဲ့ လူငယ် ကစားသမား လေး တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ အရပ်6ပေ 1 လက္မ ရှည်သူ ဖြစ်တာ ကြောင့် ခံစစ် ပိုင်းမှာ အမြင့်ဘော တွေကို လည်း အသာစီ ရယူ နိုင်သူ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက အသင်း ရဲ့ 52% သော အမြင့်ဘော တွေကို ဦးဆောင် ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ အလွတ် တည်ကန်ဘော တွေမှ4ဂိုး အထိ တောင် ရယူ နိုင်ခဲ့ ပါ သေးတယ် ။
ဒါ့အပြင် သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှုဟာ 89 % အထိ သေချာ လှ သလို အဝေးဘော တွေ ပေးပို့ မှု မှာလည်း 51 ရာခိုင်နှုန်း ထိ တိကျ သေချာ ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အသက် အရွယ် နဲ့ အရည်အသွေး တွေ အရ သူဟာ တောက်ပ တဲ့ အနာဂတ် ပိုင်ဆိုင် နေသူ ကစားသမား တစ်ဦး ပါပဲ ။
(2) အဲလပ်စ် တဲလပ်စ်
အသက် – 26 နှစ်
ကလပ် – ပေါ်တို
ဒီနွေ အတွင်း အေတီကို အသင်း ဆီ ပြောင်းဖို့ သတင်းကြီးခဲ့ ပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် သဘော တူညီမှု မရယူ နိုင်ခဲ့ ပါဘူး ။ သူဟာ ပြီး ခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဘယ် နောက်ခံလူ နေရာ ကစား ရင်း 12 ကြိမ် အထိ ဂိုး ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့တာ မို့ ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စား မှုကို ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ပေါ်တို့ ဟာ ခံစစ်ထက် တိုက်စစ် အသားပေး ကစား တဲ့ အသင်း ဖြစ်တာ ကြောင့် တဲလပ်စ် ဟာ ပိုပြီး တောက်ပ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ကြံ့ခိုင်ပြီး အမောခံ နိုင်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ရော ခံစစ် ကိုပါ ကာဗာ လုပ် ကစား ပေး နိုင်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါတွေ အပြင် သူဟာ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု အတော်လေး တိကျ ကောင်းမွန် ခဲ့တာ ကြောင့် အခုလို ဖန်တီးမှု 12 ကြိမ် အထိ ပြုလုပ် ပေးနိုင် ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ 4.8 အကြိမ် အထိ တိုက်စစ်ပိုင်း မှာ ဘောလုံး ဖြတ်တင် ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ဖြတ်တင် ပေးပို့ မှု တိကျ ခြင်းက 36 % ရှိ သလို တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ4ကြိမ် အထိ ပင်နယ်တီ ဧရိယာ ထဲ ဘောလုံး ဖြတ်တင် ပေးပို့ နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
(3) အဲလပ်စ် ဂရီမယ်လ်ဒို
အသက် – 23 နှစ်
ဘယ် ၊ ညာ နောက်ခံလူ တွေရဲ့ ကစား အားဟာ နောက်ပိုင်း နှစ်တွေ မှာတော့ ခံစစ် အတွက် သာမက တိုက်စစ် အတွက် ပါ အတော်လေး အရေး ပါတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် တိုင်းက တိုက်စစ် ရော ခံစစ် ပါ လိုက်ပါ ကစား ပေး နိုင်တဲ့ နောက်ခံလူ တွေကို အလို ရှိခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
ဂရီမယ်လ်ဒို ဟာ ဘောလုံး ကိုင် ကစား တာ ကောင်းမွန် တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်သလို တိုက်စစ် ပိုင်း အတွက် မတူညီ တဲ့ ဘောလုံး ဖြတ်တင် ပေးပို့ မှုတွေ ပြုလုပ် နိုင်သူ တစ်ဦး လည်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ကြီးမား တဲ့ အခွင့် အရေး တွေကို လည်း များစွာ ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့ပါ သေးတယ် ။
သူဟာ လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက အသင်း အတွက် ဂိုး ဖန်တီးမှု 12 ကြိမ် အထိ ပြုလုပ် ထားခဲ့ သူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ အသင်းဖော် အယ်မီဒီယာ ကတော့ 11 ကြိမ် အထိ ဖန်တီး ပေးနိုင် ခဲ့တာ ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ က ဘင်ဖီကာ ရဲ့ ဘယ် ၊ ညာ ခံစစ် တွေဟာ အသင်း အတွက် ဘဟ်လောက် အရေးပါ သလဲ ဆိုတာ သိသာ ထင်ရှား ခဲ့ရ ပါတယ် ။
(4) ဖလော်ရန်တီနို လူးဝစ်
အသက် – 20 နှစ်
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက ဘင်ဖီကာ B အသင်း အတွက် ကစား ပေး ထားခဲ့ သူ တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး ခြေစွမ်းကောင်း ခဲ့တဲ့ အတွက် စီနီယာ အသင်းဆီ ရောက်ရှိ လာသူ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူဟာ လည်း ကွင်းလယ်ပိုင်း မှာ IQ ကောင်း လှတဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ ပြီး ပြိုင်ဖက် ခံစစ် ကို ဒုက္ခ ပေးနိုင် တဲ့ တိုက်စစ် လမ်းကြောင်း တွေကို ပုံဖော် ပေးနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ တစ်ပွဲ ကို ပျမ်းမျှ 4.6 ကြိမ် အထိ ဘောလုံး ယှဉ်လု နိုင်ခဲ့ သလို တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ 12 ကြိမ်ထိ ဘောလုံး ရယူ ပြီး ကစားကွက် တည်ပေး နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူဟာ လျင်မြန် သွက်လက် တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ပြီး တိုက်စစ် အသားပေး ကစား ဟန် ကို နှစ်ခြိုက် သူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
သူဟာ အောင်မြင် တဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့ မှု 91 % အထိ ပြုလုပ် ပေးနိုင် ခဲ့တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် နည်း စနစ် ပိုင်း တွေကို ကျေညပ်သူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ သူဟာ တိုက်စစ်ပိုင်း ကို အချိန်တိုင်း လိုက်ပါ ကစား ပေးနိုင် တဲ့ ကစားသမား မျိုး မဟုတ် ပေမယ့် စိတ်လှုပ်ရှား ဖွယ် အရည် အသွေး တွေနဲ့ အတူ တိုက်စစ် ကစားပုံ ကို ဖော်ပေး နိုင်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
(5) ဟာရစ် ဆီဖာရိုဗစ်
အသက် – 27
တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး ဟာ ပွဲ အဖြေ ကို ပြောင်းလဲ ပေးနိုင် တဲ့သူ ဖြစ်တာ ကြောင့် အသင်း အတွက် အရေး ပါ လှသူ တစ်ဦး ပါပဲ ။ သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက သွင်းဂိုး 26 ဂိုး အထိ သွင်းယူ ပေးထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ အရပ်6ပေ2လက္မ ရှိသူ ဖြစ်တာ ကြောင့် အမြင့်ဘော တွေကို အမြဲ လို ဦးယူ နိုင်သူ တစ်ဦး အဖြစ် ရှိခဲ့ ပါတယ် ။
သူဟာ ခံစစ် ကစားသမား တွေကို အထူး ဒုက္ခ ပေးနိုင် သူ ဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက တော့ ခေါင်းတိုက် ဂို3းဂိုးသာ ရယူ ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူဟာ အသင်းဖော် တွေနဲ့ ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက် ကစား နိုင်ခဲ့ သလို အဝေး ကန်ချက် တွေထက် ပင်နယ်တီ ဧရိယာ အတွင်း မှာ ပိုပြီး ဂိုးသွင်း ကောင်းသူ တစ်ဦး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက တစ်ပွဲ ပျမ်းမျှ3ကြိမ် အထိ ပြိုင်ဖက် ဂိုးပေါက် ကို ခြိမ်းခြောက် ထားနိုင် ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်း ကောင်း တစ်ရပ် ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ အဆိုပါ ကန်ချက် တွေ ထဲမှ တစ်ဝက် ကျော် လောက်က ပြိုင်ဖက် ဂိုးသမား ဖက်မှ အသည်း အသန် ကာကွယ် ခဲ့ ရတဲ့ အထိ သူဟာ ဂိုးပေါက် တိကျ လှခဲ့ ပါတယ် ။ သူ့ကို လည်း ဥရောပ ထိပ်သီး ကလပ် တွေမှ အထူး စိတ်ဝင်စား ခဲ့ကြ ပါ သေးတယ် ။